त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार खोस्यो - Medianp.com
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार खोस्यो
डा. गोविन्दकेसी सँगको सहमति तोड्यो
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २१, २०७३११:३९0	काठमाडौं,२१ पुस। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट खोसेर आफैंले लिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको त्रिवि सभामार्फत आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतका आईओएमसहित सबै नौवटै संकायमा विद्यार्थीको सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार खोसेर विश्वविद्यालय आफैंले लिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध १० पटक आमरण अनसन बसिसकेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा आइएओएमलाई अधिकतम् स्वायत्तता दिने निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
तर प्रधानमन्त्री दाहालकै संलग्नतामा त्रिविले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या र भर्ना शुल्क आफैंले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्रिवि सभाले नियम संशोधन गरी सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार आइओएमका डिनको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट खोसेर कार्यकारी परिषद्लाई दिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने काम त्रिविका रजिस्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्ने छ।
मगर संघ कतारले माघेसंक्रान्तिमा सांस्कृतिक तथा वनभोज कार्यक्रम गर्दैमाओवादी कार्यालयको बैठकमा प्रचण्डले भने, देश सहमतिको दिशातर्फ जान लागेको छ